अन्तत : दिपक र दीपाले पुरा गरे आफुहरुको वर्षौ देखिको सपना « Gaunbeshi
अन्तत : दिपक र दीपाले पुरा गरे आफुहरुको वर्षौ देखिको सपना
प्रकाशित मिति : 11 August, 2021
काठमाडौ । हाँस्य कलाकार दीपकराज गिरी र दिपा श्री निरौलाको एउटा सपना थियो । आधुनिक र ठूलो सिनेमा हल खोल्ने । महामारीको समयमा सिनेमा क्षेत्र ठप्प भएको यो समयमा दीपक र दिपाले त्यो सपना पुरा गर्न लागेका छन् । नयाँ बानेश्वरस्थित शंखमुल रोडमा उनीहरुले सिनेमा घर निर्माण गरिरहेका छन् ।
आउँदो चैतसम्म निर्माण सम्पन्न गरिसक्ने अहिले धमाधम काम भइरहेको छ । दुईवटा स्क्रिन रहने सिनेमा हलमा चारसय सिट रहने छन् । “करिब ९ करोड लगानी हुने उनीहरुले अनुमान गरेका छन् । दीपकसँगै दीपाश्री निरौला तथा ‘छक्का पञ्जा’ ग्रुपको लगानी रहने छ ।
दीपकले सिनेमा हल खोल्ने आफुहरुको पुरानै योजना रहेको बताए । आफै हल बनाउँदा चलचित्रकर्मीलाई सहज होला भन्ने अनुमान उनीहरुले गरेका छन् । महामारीका कारण सिनेमा क्षेत्र ठप्प हुँदा आफुहरुले गरेको कामले अन्य कलाकार र सिनेकर्मीलाई पनि हौसला मिल्ने विश्वास दिपाको छ । निर्माणाधीन महलको माथिल्लो तलमा सिनेमा हल हुने दीपाले बताएकी छन्
सधै म आफ्नो काममा नै ब्यस्त हुन्थे राजले के गरिरहेका थिए मलाई थाहै भएन : शिल्पा शेट्टी
राज कुन्द्रा पोर्नोग्राफी केसमा मुम्बई क्राइम ब्रान्चले २३ जुलाईमा शिल्पा शेट्टीको बयान दर्ता गरेको
काठमाडौं छाडेकी सोनिकाले गाउँमा सुरु गरिन यस्तो व्यवसाय( भिडियो हेर्नुहोस्)
काठमाडौ । सोनिका रोकाय सामाजिक सञ्जालमा निकै चर्चित नाम हो । कलाकार, युट्युवर रोकाय अहिले
नेहा कक्कडको जीवनमा फेरी के भयो ? यसकारण अचानक ‘इन्डियन आइडल’वाट गायब भएकी रैछन्
एजेन्सी । बिग बोस ओटीटी अन्तिम चरणमा छ। यस्तो स्थिति मा, धेरै अतिथि कलाकारहरु
अक्षय कुमारकी आमाको निधन, अक्षयले के लेखे यस्तो भावुक स्टाटस ?
एजेन्सी । बलिउड अभिनेता अक्षय कुमारकी आमा अरणा भाटियाको निधन भएको छ । उनकी आमा